Ku dhawaad 16,000 arday oo u fariistay imtixaanka fasalka 4 iyo fasalka 8 gudaha Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandKu dhawaad 16,000 arday oo u fariistay imtixaanka fasalka 4 iyo fasalka 8 gudaha Puntland
Ku dhawaad 16,000 arday oo u fariistay imtixaanka fasalka 4 iyo fasalka 8 gudaha Puntland
May 18, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweyne Deni oo furaya imtixaanka gudaha Garoowe. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ku dhawaad 16,000 arday ayaa maanta oo Sabti ah u fariistay imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare iyo fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe gudaha Puntland.
106 goobood oo ku yaala gobolada kala duwan ee Puntland ayaa imtixaanku uu ka dhacayaa, sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada.
Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa si rasmi ah imtixaanka uga furay gudaha magaalada Garoowe ee caasimada Puntland.
“Waa maalin runtii maalin farxadeed ah, waa maalintii imtixaanka ee ay u fariisanayeen arday ku dhow 16,000, runtii dowladda Puntland waxaa sharaf weyn u ah sida quruxda badan oo u nidaamsan oo wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadku u diyaariyeen imtixaanada shahaadiga ah,” ayuu yiri madaxweynuhu.
“Sanad dugsiyeedka sanadkan oo runtii qiimo gaar ah aniga iigu fadhiy oo kii u horeysay anoo xil haya aan uga soo qeybgalo ah, waxaan Ilaahay ka rajeynayaa in imtixaankan uu ku dhammaado guul iyo ardayda oo aan u rajeynayo natiijo wanaagsan.”
Wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa muddo sannooyin ah qaadeysay imtixaankan mideysan kaasoo tusaale fiican u noqday waxbarashada Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland oo u safray magaalada Gaalkacyo
Wasiirka waxbarashada Puntland: Goodax isaga laga rabaa in uu cadeeyo oo sheego meesha uu ku fashilmay imtixaanka Puntland
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo sheegay in sargaal katirsan Al-Shabaab ay ku dileen magaalada Marka
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay dileen sargaal katirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Taliyaha Guutada 14-ka Oktoobar ee ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya Gaashaanle Dhexe Axmed Cabdi Cali ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in [...]
Sanadguurada 74-aad ee maalinta ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo la xusayo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sanadguurada 74-aad ee maalinta ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa laga xusayaa gudaha Soomaaliya. Dhammaan gobolada dalka oo dhan ayaa maanta oo Arbaco ah waxaa lagu qabtay munaasabadaha xuska maalinta ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ku [...]
African Union peacekeepers to seek Gulf aid in Somalia
The head of the African Union’s peacekeeping mission in Somalia said Friday his operations against al-Shabaab militants have been hit by European Union funding cuts. Speaking in the Kenyan capital, Francisco Caetano Jose Madeira said [...]